Ukuphupha iMarzipan Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IMarzipan ikakhulu yenziwe ziiamangile, iswekile kunye namanzi anyukayo. Ngamanye amaxesha amanye amavumba ayongezwa ngokunjalo. IMarzipan imvelaphi yayo isuka eMpuma, kuba zonke izithako zokutya okumnandi zifunyenwe apha. Kukholelwa ukuba amanenekazi abafazi ngokukhethekileyo akhetha oku kumnandi.
Kuba izithako zeemarzipan zazibiza kakhulu, yayigcinelwe ookumkani nezidwangube ixesha elide. IMarzipan inokuthengwa nakwiivenkile ezithengisa iziyobisi okwexeshana, njengoko yayithathwa njengelungileyo yokwetyisa kunye nokuvuselela amandla. Kwaye kwathengiswa njengesixhasi sesondo.
Namhlanje, imarzipan inokufumaneka kuyo yonke ivenkile enkulu, rhoqo kwizithako zokubhaka. Kuba ihlala isetyenziselwa ukubhaka kunye nokuhombisa iikeyiki.
1 Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "marzipan" lisetyenziswa njengenye isilumkiso iqondwe ngumphuphi. Kuya kufuneka ulumkele ii sycophants kwi el mundo yomlindo. Kuba bafuna ukumbamba kwaye bamenzakalise ngasemva kwakhe. Kwakhona, ngamanye amaxesha iphupha elinjalo linokubonisa ukuba umntu uya kufumana ulonwabo lwexeshana kuphela.
Ukutya iilekese ze-marzipan ephupheni kuthembisa ixesha elonwabisayo nelonwabisayo lokuvusa ubomi. Ukuba umphuphi unika iilekese ezinjalo komnye, kuya kufuneka amnike ezinkulu indleko ukubala kwindawo yemali. Ukuba uthenga imarzipan ephupheni lakho, umzekelo kwivenkile enkulu, akufuneki uchithe imali yakho kancinci.
Iibhola zeMarzipan njengophawu lwamaphupha, ekusenokwenzeka ukuba agqunywe kwitshokholethi, zihlala zinika ubomi ekuvukeni. Suerte kunye nokuchuma kunye naye. Ukuba ubona iilekese kumaphupha akho IKrismesi okanye ngomhla we-Saint Nicholas, ungakhangela phambili kumaxesha okonwaba kunye nobomi bosapho obulungileyo
Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha ubona kumfanekiso wephupha «marzipan» njengophawu olumnandi lwe Ubumnandi kokubini kumphuphi nakumnqweno wakhe weziyolo zenyama kunye nokunethezeka. Kuba i-marzipan yenziwe ziiamangile, isalathiso sobufazi obunemibala yokulala nako kunokufihlwa kwiphupha elinje.
Ukuba umpheki we-pastry usebenzisa i-marzipan ephupheni ukuhombisa iikeyiki, iitarts okanye iikeyiki, oku kungathathwa njenge isilumkiso ukuba iqondwe. Umphuphi kufuneka anqandwe kwihlabathi lokuvuka kwaye angaweli enkunkumeni. Ukuba umphuphi uluma into ethile kwisiqwenga semarzipan ngelixa ulele, oku kunokubonwa njengokwanelisa iimfuno zombini ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo.
Nabani na obumba amanani e-marzipan ephupheni lakhe kufuneka abajonge kakhulu. Kungenxa yokuba ezinye izikhombisi ekutolikeni amaphupha zinokufumaneka koku. Ngaba yayisisilwanyana okanye umntu othile? Mhlawumbi umlinganiswa wencwadi ehlekisayo naye?
Uphawu lwephupha «Marzipan» - ukutolika kokomoya
Ngokokuhlalutya okungaphaya kwephupha, uphawu "marzipan" luzama ukutsala umdla walowo uphuphayo kwinto yokuba Ukuzonwabisa Inokuba nayo ikrakra kamva. Ke ngoko, kuya kufuneka usoloko ucinga ngononophelo malunga neziphumo zentuthuzelo yakho.